Soo saaraha robot alxanka Shiinaha Laser iyo qeybiye | Yunhua
Nidaamka alxanka laser-ka robotku wuxuu ka kooban yahay gacan-qabad gacan-ku-ool ah, qalab farsameed oo fara badan, oo leh madax goyn laser ah oo lagu dhejiyay saxanka wejiga gacanta aaladda.
Madaxa goynta ayaa diiradda saaraya optics-ka laydhka leysarka iyo habka xakamaynta dhererka oo aan muhiim ahayn. Xirmada gudbinta gaaska caawisa waxay u qaybisaa gaas, sida oksijiin ama nitrogen, madaxa alxanka. Nidaamyada badankood waxay adeegsadaan matoor laser ah oo u geeya laydhka leysarka madaxa goynta robot-ka iyada oo loo marayo fiilada fiber-optic.
Robotka alxanka laser-ka ayaa si fudud otomaatig uga dhigi kara codsigan soo saarayaashana waxay arki doonaan dib-u-hagaajin soo hagaagtay iyo waldiyo tayo sare leh.
Yunhua wuxuu isku xiri doonaa awoodda ugu fiican ee Shiinaha ay sameysay ee leysarka leh qiime wanaagsan iyo tayo deggan. Oo samayn kara xoogaa naqshad gaar ah sida ku cad macaamiisha xaaladda dhabta ah. Macaamiisha ayaa keydin kara ilaa 50% dhimis ugu yaraan marka lala barbardhigo robot alxanka alwaaxda caanka ku ah.
Nidaam kasta oo robot alxamida laser waxaa loo habeeyay qeexitaanka iyo baahida macaamiisha.
Xuduudaha isha korontada
Awood soo saar celcelis ahaan
Dhererka Wave （nm）
Habka hawlgalka Sii socosho / isbadal
Maxi inta jeer ee isbadal ku dhaca （KHz）
Degganaanta awoodda wax soo saarka
Tayada indhaha M²
Dhexroor xudun （μm）
Dhererka fiber saarka （m）
380 ± 10% supply sedex waji saad ， 50-60HZ talantaalli ah hadda
Awoodda kala xakamaynta awoodda （%）
Awood isticmaalka （W）
450 × 240 × 680 (Waxay ka kooban tahay gacanka)
Q1. Ka waran shuruudaha loogu talagalay alxanka laysarka?
A. Qalabka, waa inaysan lahayn wax iftiimaya oo sarreeya, tani waxay jareysaa awoodda isha laser,
Khaladaadka ku habboon, waa inuu ka yar yahay 0.2 ~ 0.5mm, haddii farqigu aad u ballaaran yahay, kuma habboona alxanka laysarka,
Dhumucda saxanka, caadi ahaan waxay ka yar tahay 5mm
Q2. ka waran faa'iidada robot alxanka laysarka?
A. waxaa jira faa iidooyin badan oo loogu talagalay alxanka laser-ka robot, sida waxqabadka alxanka wanaagsan, xawaaraha alxanka wanaagsan, iyo qiimaha hooseeya, iwm.
Q3aad. ma fududahay in la barto alxanka laser-ka robot-ka?
A. marka la barbardhigo robot arc alxanka, waxay leedahay shuruudo looga baahan yahay wadaha. Haddii hawlwadeenku raaco waxbaristeena, waxay ku kacaysaa qiyaastii 3 ~ 5 maalmood oo ku shaqeyn kara alxanka laser-ka robotka.
Q4. waxa ku saabsan qaybaha dayactirka ee robot alxanka laser?
A. Qaybaha ugu muhiimsan ee dayactirka waa muraayadda alxanka laysarka
Q5. Miyaan u isticmaali karaa alxanka saxanka dhumuc weyn?
A. Aragti ahaan, waa la isticmaali karaa, laakiin qiimuhu aad buu u sarreeyaa, mana aha wax la soo jeedin karo.
Hore: Mig alxanka Robot
Xiga: 8 Goobta Xaraashka Shaqada ee loo yaqaan 'Axis Robotic Alxation Workstation' oo leh Labo Mawqif